Uwe agbụrụ nke oge nke USSR
O yiri ka ihe niile dị, n'oge na-adịbeghị anya, na mgbe niile, oge niile dị n'okpuru aha USSR gafere na echiche, omenala, nkà, ejiji na, n'ezie, uwe okpukpe. Ka anyị leba anya na nke ikpeazụ - ụdị uwe dị na ejiji n'oge oge Soviet?
Uwe agbụrụ nke oge ndị Soviet biri na iri afọ atọ - na oge nke 50, 60 na afọ 70, oge ọ bụla abụghịkwa ụdị uwe, kama ọ bụkwa onyinyo nke mmadụ, na-akọwa ihe ọ bụ.
Ná mmalite nke akụkọ ihe mere eme nke USSR, n'afọ ndị 1920 na 1930, uwe ụmụ nwanyị nọgidere na-ejide onwe ha na coquettish - akwa ejiji mma na akpụkpọ anụ, akwa akwa silk, akpụkpọ ụkwụ dị elu na chalịka dị iche iche mere nwanyị n'anya nwoke a nụchara anụcha.
Otú ọ dị, site na mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, ejiji ndị inyom nke oge USSR gbanwere n'ụzọ dị ukwuu, na ntinye nke nwanyị a nụchara anụcha na nke a nụchara anụcha bịara uwe dị mma n'echiche zuru oke, iji cheta nwanyị ahụ na ya bụ onye ọrụ nke ọrụ aka - isi awọ na-enweghị ntụpọ, akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ. Otú ọ dị, a ghaghị icheta na uwe ndị dị otú ahụ dị nnọọ mma ma dịka ụkpụrụ nke ihe onwunwe na ihe dị elu.
Uwe eji eji ezumike eme ihe na-adi nma ma kwadoro ya, ihe di iche iche na ndi na adi nma na-adi nma. Ụmụ nwanyị ndị inyom nwekwara mmasị dị ukwuu.
Uwe nke oge USSR - agbaso
Oge na-egbukepụ egbukepụ nke oge Soviet nwere ike ịkpọ njedebe nke afọ 50, mgbe n'etiti nchịkwa na ọchịchịrị nke uwe wee malite ịpụta na-eto eto na-enwe obi ụtọ na uwe ejiji mara mma. Ụmụ agbọghọ na- eto eto na- eji uwe na-egbuke egbuke polka-dot na-egbuke egbuke na-ejide ya na eriri dị iche iche, ụta na ngwa ngwa dị iche iche, na-ekwusi ike ha dị iche iche na-achacha acha ma dị iche iche maka oge edozi isi.
Ụdị nke ndị Stilig na-enwokwasị na-egbuke egbuke ma na - ejikọta ha na - acha odo odo na agba odo na usoro dị iche iche, jaket ogologo na nke na - enweghị isi, na uwe na - egbuke egbuke, nke ụkpụrụ omenala na - adịghị mma na uwe elu, ma gbakwunye n'ozuzu ya, E ji nlezianya edozi ihe oyiyi ahụ na-adịghị ahụkebe.
Oge nke USSR a ma ama maka mmezu egwuregwu ya dị elu, ya mere, a dịghị eleghara uwe ejiji egwuregwu nke oge ahụ anya.
Otu ihe dị iche iche nke ejiji na ụdị nke USSR bụ ákwà dịgboroja nke nwere ọtụtụ ọnụọgụ dị na chest, nakwa ụra na uwe ogologo ọkpa. Egwuregwu ọzọ a na-ewu ewu bụ nnukwu etinye na akpa nke ákwà dị iche
Kedu ihe ị ga-eji akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ?
Kedu ihe jikọrọ agba mint na uwe?
Kedu otu eji eji ejiji akwa?
Kedu ihe ntutu isi dị na nwata?
Kedu otu esi eji ejiji nke ọma maka nwa agbọghọ?
Kedu ihe ị ga-eji ejiji agba aja aja?
Kedu otu esi mụta foto?
Foto a ga-ewere n'oge okpomọkụ
Kedu ihe ị ga-eyi akwa?
Kedu ihe ị ga-eyi uwe na-acha ọcha?
Uwe maka nwanyị azụmahịa
Foto na uwe nwoke
Kedu ihe ị ga-eyi n'oge okpomọkụ?
Stockings na okporo
Olee otú transplant mkpụrụ vaịn na ọdịda?
Ejiji ejiji - Mmiri-N'oge okpomọkụ 2016
Ememme Afọ Ọhụrụ nke Mmasị
Ejiri anụ na oven
Belyashi si yist mgwakota agwa na oven
Mmiri mmiri igwe
Nkịtị Mgbanaka Polish
Ọrịa polycystic akụrụ na nwamba
Esi esi esi nri nnu ehi?
Nri PVC nri
Coral uwe na prom
Ndị ntanetị maka ụlọ ihe nkiri - olee otu esi ahọrọ?
Echiche nke oge okpomọkụ
Uwe nke Kenzo
Ornella Muti n'ụgbọ mmiri
Ndị Sneakers Na-agba Ọcha Mmiri Nike
Ụdị nke nwamba
Blue agba n'ime ime
Égbè égbè na October - ihe ịrịba ama
Mpempe akwụkwọ na aka aka gị
Nnu n'ime urine nke nwatakiri